Waa maxay microcredit? Fiiri qeexida Lexicon Financial
Start daymaha -Leaks ammaahda danyarta
Muhammad Yunus waxaa loo tixgeliyaa mucjisada ammaahda danyarta, Laga soo bilaabo sanadka 2006, waxaa loo isticmaalay inay kor u qaadaan horumarinta dadka ku nool dalalka soo koraya. Dad badan oo degan magaaladaas ma helayaan fursad ay ku helaan suuqa ugu horreeya oo ay leeyihiin dhaqaale aad u yar. Si uu dadkaas u caawiyo, Yunus wuxuu abuuray fikradda deymano yaryar oo leh miisaan deyn ah illaa 1.000 US Dollar halkii qofba.
Marka deynta la qaato, waa in lagu maalgeliyaa maalgelinta mustaqbalka. Kuwaas waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, hoogaamiyeyaasha oo jeclaan lahaa inay iskaa u shaqeeyaan aqoon isweydaarsi. Ama beerista miraha beerahooda. Dakhliga macaamiisha ayaa culays saaraya dulsaarka sare. Isbeddelkan ayaa udhexeeya 20% iyo 100%, heerka celceliska dulsaarka caalamka wuxuu kudhow yahay 37%. Muhiim maaha haddii deyn bixiyuhu uu leeyahay deyn cad oo nadiif ah. Tilmaamahaas adag waxaa ka mid ah oo keliya waddamada warshadaha, halkaas oo microcredit ay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaraan. Tirada kuwa deynsanaya ayaa sii kordhaya sanadkiiba.
Microfinance ee dalalka soo koraya
Wadamada soo koraya, haweenka qaasatan waxay ka faa'iideysanayaan micrreditit. Waa inay sidaas darteed u soo jiidaan jagooyinkooda bulsho ahaaneed ee aan ku habboonayn wadankooda. Hooyooyinka keligood ah ee ka mid ah dalalkaan waxay si dhib leh u leeyihiin dakhli joogto ah si ay u quudiyaan carruurtooda. Carruurtan ayaa sidoo kale loo diidey in ay helaan xarumaha waxbarashada sababo saboolnimo. Faa'iidooyin dheeraad ah ayaa ka soo baxa dhinaca caafimaadka. Caymiska caafimaadka badanaaba maaha dowlad goboleed. Intaa waxaa dheer, dadka ku nool baadiyaha waxay la il daran yihiin daryeel caafimaad la'aan. Suurtagalnimada inaad u safartid magaalada aad u fog waxay qaadan kartaa maalmo.
Iyadoo fursaddan cusub ee maaliyadeed, haweenkani waxay ku maalgelin karaan xirfadahooda. Si loo dhammeeyo, waxay raadinayaan bixinta bangiga fikradda ah credit-ka. Waxa kaliya oo la siin doonaa amaahda wadajirka ah. Mabda'a damaanad qaadku waa mid ansax ah. Dhowr haween ah ayaa u codsanaya dhinaca kale, sababtoo ah wax qiimo ah uma laha ilaalinta. Dib-u-bixinta dhibcaha yaryar waxaa lagu sameeyaa bil walba qaybaha sida wadamada warshadaha leh, intooda badanna waxaa bixiya lacagaha.
Inkasta oo heerka deyn bixinta ee deynta yaryar ay ka sarreyso 90%, ma jirto baadhitaan cad oo ku saabsan guulaha deyntan. Ilaa hadda, bangiyada ayaa muujiyay in saboolnimadu hoos u dhacayso iyo barwaaqaduna sii socoto. Si kastaba ha noqotee, warbaahinta waxaa jira dumar ku hadla si wanaagsan oo ku saabsan horumarkooda shakhsi ahaaneed. Dhaleeceynta qaarkood waxay u maleynayaan in haweenkani ay si macquul ah u dhejiyaan odhaahdan, laga yaabee inay yihiin cadaadis.
Dhibaatada kale waa dulsaar. Haddii deyn bixiyuhu ku guuldaraysto inuu dib u bixiyo amaahda hal sano gudaheeda, waa in la sameeyaa mikrocredit cusub. Iyadoo tanina, deyn joogta ah ayaa dib loo bixin karaa, qaar ka mid ah lacago cusub ayaa soo galaya iskii u shaqeysta. Asal ahaan, tani waxay saameyneysaa saamaynta ah in qaar ka mid ah kuwa amaahatay ay si joogto ah ugu tiirsan yihiin kuwa wax u qalma.
Dakhliga macaamiisha ee waddamada warshadaha leh
Nidaamkani waa mid muhiim ah oo ka mid ah suuqa dhaqaalaha ee dalalka warshadaha. Iyadoo loo marayo shaqo gaaban, mushahar yar, deynta ama iibsiga, dad badan oo ka socda wadamada warshadaha ayaa weerara micrreditit. Fursado lacageed ayaa markaa la xidhayaa ogeysiis gaaban. Xaaladaha microcredit ayaa ku yaryihiin marka loo eego deymaha kale. Waa inay jirtaa cinwaan wargalineed oo go'an oo dakhliga bilkasta khasab maaha in uu ka badnaado dhowr boqol oo euros. Waxaa intaa dheer, dadka haysta dhibcaha amaahda oo liita waxay heli karaan deynta. Hay'adaha amaahda internetka ee gaar ahaan waxay si gaar ah ugu takhasustaan ​​microcredit oo leh hay'adaha kabista.
Maqaalka horedhigista lacag bixinta
Maqaalka xigtamuddada call